नयाँ आईजीपीसामु ४ चुनौती, कहाँबाट शुरू गर्दैछन् प्रहरीको शाख जोगाउने काम ?
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को दज्र्यानी चिह्न लगाउने कार्यक्रममा महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीलाई ५ वर्षमा हुन नसकेका काम इच्छाशक्ति भएको खण्डमा ५ महिनामा गर्न सकिने बताए ।
‘राज्यले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । चुनौतीहरू थुप्रै छन् । कतिपय काम पूरा गर्न बाँकी छन् । ती सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुहुनेछ, गृहमन्त्रीको रुपमा तपाईंलाई पूर्ण सहयोग हुनेछ । सहकर्मीहरूलाई साथमा लिएर एकतावद्ध भएर काम गर्नुहुनेछ,’ गृहमन्त्री थापाले भने, ‘तपाईंको कार्यकालको समय थोरै छ तर इच्छाशक्ति देखाउनुभयो भने ५ वर्षमा हुन नसकेका काम ५ महिनामा गर्न सकिन्छ ।’
छोटो समयका लागि प्रहरी महानिरीक्षकको रुपमा पदोन्नति भएसँगै अघिल्ला आईजीपीले गर्न नसकेका काम गर्नुपर्ने चुनौती ज्ञवालीसामु छ । प्रहरी संगठनका कतिपय महत्त्वपूर्ण विभाग र निकाय कुशल नेतृत्वको पर्खाइमा छन् ।
१ नम्बर प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व खाली छ भने अन्य प्रदेशका प्रमुख पनि पदोन्नति हुने भएकाले सबै प्रदेश प्रमुख खाली हुनेछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका डीआईजी र एआईजी पनि खाली छन् ।
प्रहरी संगठन नियम र नीति अनुसार चल्ने भएकाले कुनै पनि काममा चुनौती नभएको आईजीपी ज्ञवाली बताउँछन् । ‘संगठन जीवन्त हो । निरन्तर हुने काम त छँदैछ । व्यक्ति परिवर्तन हुँदा संठगनलाई केही पनि असर पर्दैन, हिजोदेखि नै प्रहरीले गर्दै आएका काम मैले गर्ने हो,’ आईजीपी ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने ।
संगठनको नियमित प्रक्रिया नियम र नीतिसंगत हुने भएकाले सबै कुरा हुने आईजीपी ज्ञवालीले बताए ।
विवादरहित बढुवा गर्नुपर्ने चुनौती
प्रहरी संगठनमा तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने काम हो – अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को । आईजीपी ज्ञवालीसामु बढुवालाई विवादरहित बनाउनु नै पहिलो चुनौती देखिएको छ ।
निवर्तमान आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसँगै ३ जना एआईजी र २५ डीआईजीले अवकाश पाएका छन् । जसले गर्दा प्रदेश प्रमुख र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रत्यक्षरुपमा सहयोग गर्ने डीआईजीहरू खाली छन् ।
आईजीपी ज्ञवालीको कार्यकालको शुरूमै हुने बढुवाले आगामी प्रहरी संगठनको नेतृत्वबारे समेत संकेत गर्ने भएकाले निष्पक्ष निर्णय गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । व्यक्तिगत निकटता, आन्तरिक दबाब र राजनीतिक भनसुनबाट मुक्त रहेर निष्पक्ष रुपमा निर्णय लिँदै बढुवालाई विवादरहित बनाउनु पहिलो चुनौती रहेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । प्रहरीमा हाल ८ जना डीआईजी मात्र बाँकी छन् ।
प्रहरीका पूर्व एआईजी नवराज ढकाल प्रहरी संगठनमा विज्ञ जनशक्तिले अवकाश पाएसँगै अनुभवी जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । ‘प्रहरीमा देखिएको विभाजनलाई एकीकृत गर्न समेत आईजीपी ज्ञवालीले महत्त्वपूृर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्,’ ढकालले लोकान्तरसँग भने ।
दोस्रो चुनौती – प्रहरी समायोजन
आईजीपी ज्ञवालीका लागि दोस्रो चुनौती प्रहरीको समायोजन रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । प्रहरी समायोजन ऐन आउने चरणमा रहेकोे अवस्थामा ८० हजार प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने चुनौती रहेको पूर्व एआइजी ढकालले बताए । ‘समायोजनमा जाने प्रहरीलाई कसरी कमान्ड गर्ने भन्ने कुरा पनि ठूलै चुनौतीका रुपमा देखिने छ,’ ढकालले भने ।
निर्मला हत्या प्रकरण अर्काे चुनौती
आईजीपी ज्ञवालीसामु अर्काे चुनौतीको रुपमा निर्मला हत्या प्रकरण रहेको छ, जुन लामो समयदेखि सुल्झन सकेको छैन । वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) हुँदा पहिलो पटक अनुसन्धानका लागि कञ्चनपुर जाने प्रहरी अधिकृत ठाकुर ज्ञवाली नै हुन् । निवर्तमान आईजीपी खनालले जाँदाजाँदै सबै अनुसन्धान उल्ट्याएर सीआईबीको शुरू अनुसन्धानलाई मान्ने निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा अदालतसम्म मुद्दा खेपिरहेका अनुसन्धान अधिकृतलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने चुनौती समेत ज्ञवालीसामु छ ।
‘उहाँ आफैं फिल्डमा खटिनु भएकाले निर्मला हत्या प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती छ,’ प्रहरीका उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै आईजीपी खनालले छानबिन टुंगिने कुनै ‘टाइमलाइन’ नहुने बताए । ‘निर्मला हत्या प्रकरणको निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेका छौं । यो आजै पनि हुन सक्छ, अथवा १ वर्ष पनि लाग्नसक्छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने ।
‘इन्काउन्टर’ गर्ने प्रहरीमाथि कारवाही गर्ने पत्र !
प्रतिबन्धित विप्लव नेकपाका नेता कुमार पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरी कर्मचारीलाई कारवाही गर्न पत्राचार गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकृतलाई कारवाही गर्न पत्र पठाइसकेको अवस्थामा आईजीपीले कति सक्रियता देखाउने भन्ने चुनौती पनि छ ।
न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न र पेशी स्वचालित प्रण...